2010: Sefa, Gadzirisa, Gadzirisa | Martech Zone
Tiri kukurirwa neruzivo kubva kune vezvenhau, kutsvaga uye yedu inbox. Mavhoriyamu anoramba achikwira. Ini handina kana pasi pemitemo zana mubhokisi rangu rekushandisa kuendesa mameseji uye kunyevera zvakanaka. Karenda yangu inoenderana pakati peBlackberry yangu, iCal, Google Calendar uye Tango. ndine Google Voice kubata bhizinesi mafoni, uye YouMail kubata nhare dzakanangana nefoni yangu.
Joe Hall akanyora nhasi izvo zvine chekuita nekuvanzika uye kushandiswa data rakasarudzika neGoogle rinogona kunge richitungamira mukuzviparadza. Ini ndinoda zvakatumirwa naJoe asi handibvumirane neizvi nemoyo wese. Sezvo ini ndichiramba ndichishandisa Google, ndinoda kuti vawedzere yega yekupedzisira data kuti vandipe mhinduro yakagadziriswa yakanangwa kwandiri pachangu. Ini handidi kutsika nemhedzisiro ... ndipe mhinduro yandinoda.
Twitter yave kusadzora… kune makambani akawandisa, vatinoshanda navo, nyanzvi uye masevhisi andiri kuda kutevera asi rwizi rwemashoko ikozvino irwo firehose. Ndinofara, Feedera yakaratidza uyu semukana… saka ndinogona kubva pane izvi:
Kufanotaura kwangu kwegore ra2010 ndiko kuti zviwanikwa suites izvo firita, optimize uye personalize ichava hasha. Kuenderera mberi kwekudzikisira makambani kunosundidzira rimwe basa pane mashoma zviwanikwa. Kubudirira kwedu kunofanirwa kuwedzera, kunyangwe tichitenda kuti tine kugona kana kuti kwete.
Facebook uye LinkedIn vakateedzera yehupenyu hweTwitter-nzira yekuzivisa zvidzoreso. Blackberry inoteedzera chiitiko ichi pafoni yangu neizwi, email uye facebook. Kunyange ini ndichida Mac yangu uye ndichida kuti yakanaka sei iyo iPhone interface, iro basa rangu rinoramba richiwedzera. Ini handidi runako… ndinoda kugadzirwa. Kudhirainha nzvimbo dzakabatsira muna2009, asi ikozvino havachadzoreki uye ini ndoda kubatsirwa kuvakoromora mumatepi akakodzera kwandiri pachezvangu.
Vhiki rino, ndatanga kushanda naChaCha. Munguva yakapfuura, ini handina kushandisa sevhisi yavo; zvisinei, ini zvino ndawedzera 242242 kubhuku rangu rekero kuti ndigone kunyora mibvunzo uye ndiwane mhinduro imwechete inoenderana. Pane zvakawanda zvekugutsikana zvatove… pandiri kutyaira ndinogona kubvunza kero, nhamba dzerunhare, nguva dzechitoro, nezvimwe zvekuenda kwangu. Ini handifanire kutsvaga, kusefa, ndobva ndafambisa webhusaiti. Ini ndinongoda mhinduro… imwe mhinduro.
Handisi ndega. Kukura kwemamwe akakodzera, akazara mibvunzo ari kukurumidza kukura paGoogle futi. Ini ndinotenda maitiro ekutsvaga acharamba achienderera mberi neiyi nzira - nemasevhisi kusefa kune akanakisa mhedzisiro ichiva yakakosha.
Nekuda kweizvozvo, fungidziro yangu yegore ra2010 ichave yakawanda yezvishandiso zvinoshamisa pakusimuka kubatsira mabhizinesi nevatengi kusefa, kukwidziridza uye kugadzirisa kwavo zviitiko online. Uku kumwe kurova kune Vashambadzi - zvinoreva kuti meseji yavo inofanirwa kunge iri zvimwe inoenderana, yakakodzera, uye yakakosha… zvikasadaro inozobviswa.
Tags: 2010karendakalendari kuenderanafiritagoogle voicejoe horooptimizepersonalizePredictionsyoumail
Chrome: Kunakidzwa Kwakawanda neinjini dzekutsvaga
Zvita 12, 2009 na8:52 PM
Dec 13, 2009 pa 8: 38 AM
Ini ndinobvuma chose kuti Twitter inogona kuve isingatarisike nyore uye kuti kune ramangwana rakajeka rezvishandiso zvakaita seyakurukurwa pano.